Ciidamada xoogga oo xubno Al-Shabaab ah ku dilay Gedo. -News and information about Somalia
Home Warkii Ciidamada xoogga oo xubno Al-Shabaab ah ku dilay Gedo.
Ciidamada xoogga oo xubno Al-Shabaab ah ku dilay Gedo.
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada Xoogga dalka ay howlgal ka dhan ah Al-Shabaab ay ka sameeyeen duleedka degmada Baardheere ee Gobolkaasi.
Abaanduulaha Guutada 10-aad ee Ciidanka Xoogga dalka Gaashaanle dhexe, Cismaan Sheekh Cabdi ayaa sheegay in ku dhawaad 14 saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsanaa Al-shabaab ay ku dileen, islamarkaana waxaa uu sheegay in howlgalka Al-Shabaab loogu gubay gaadiid dagaal,isagoo xusay in saanad militari ay ka furteen.
Gaashaanle dhexe Cismaan Sheekh Cabdi ayaa Waxaa uu sheegay in Ciidamada xoogga ay la wareegeen Saldhigyadii Al-Shabaab ku lahaayeen deegaannada Reydab iyo daar Macalin,isla markaana ay guul ka gaareen dagaal ay la galeen.
Mudooyinkii dambe ayaa Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ay ku dagaalamayeen duleedka degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
Previous articleDagaal lagu qaaday saldhig ay ciidamada Soomaaliland ku leeyihiin Ceerigaabo
Next articleGuddoomiye Cumar Filish oo magacaabay guddoomiyaal degmo
KASHIFAAD: Doorka Villa Soomaaliya Ee Qorshaha Barre Hiiraale
C.rashiid XIDIG oo Weerarkii Qalyar La Xidhiidhiyey Hadalkuu Sheegay Axmed Madoobe...